एयरपोर्टनजिकका अग्ला घर, बन्दा चुपचाप अहिले बबन्डर – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एयरपोर्टनजिकका अग्ला घर, बन्दा चुपचाप अहिले बबन्डर
२०७१ असार ४, बुधबार ०२:५१ गते
भरतपुर विमानस्थलनजिकमा घर भएका बासिन्दाको अहिले निद्रा, भोक हराएको छ । आफ्नो घर कुन बेला भत्कने हो भन्ने त्रासमा छन् उनीहरु । विमानस्थल क्षेत्रमा निश्चित उचाइका मात्रै घरहरु बनाउन पाइन्छ, ऐन–नियम यही भन्छ । झन्डै १८ वर्षअघि तयार भएको ऐन मिचियो भनेर प्रशासन अहिले जुर्मुराएको छ । ऐन तयार भएको १८ वर्ष पुगे पनि त्यस क्षेत्रमा अग्ला घर बनेको आठ वर्ष पनि भएको छैन । ऐन बनेको दशकपछि अग्ला घर उभिन थाले । अग्ला घर उभिएको दशक पुग्न लाग्दा बल्ल किन जाग्यो त प्रशासन ? चित्त नबुझ्दो कुरा यही हो ।
केही भ्रमहरु ः
विमानस्थलवरपरका घरहरु ध्वस्तै हुन थाले भन्ने पनि धेरैको मनमा छ । बाटो विस्तार गर्दा डोजर लगाएर घर भत्काएको दृश्य हाम्रो दिमागमा ताजै छ । अब एयरपोर्ट आडका घर पनि यस्तै हुने भए भन्ने हामी सोच्दै छौँ । तर, हवाईजहाज उडानमा असर पर्ने देखेर विमानस्थल प्रशासनले केही निश्चित उचाइ मात्र घटाउन भनेको हो । वरपरका २५७ घरहरु मापदण्डभन्दा बढी उचाइका पाइएको छ । घरका उचाइ घटाउने हो, जगै भत्काउने होइन । २५७ मध्ये विमानस्थलको तारबारसँगै जोडिएका बाहेक अरु घरको कम्तीमा एक तला कायम रहने अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, एयरपोर्ट उत्रने जहाजको रूट परिवर्तन भएको छ, अनि पहिलाका भन्दा ठूला जहाज आउन थालेका छन् । त्यसैले, मापदण्ड लागू हुन लाग्या हो भन्ने पनि धेरैको मनमा रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ र २ मा विमानस्थलवरपर बनाउन मिल्ने घरहरुको उचाइ र मापदण्ड तोकिएको छ । विमानस्थललाई लागू हुने आधारभूत मापदण्ड नै अहिले कार्यान्वयन हुन थालेको हो । विमानहरुको रूट र आकार परिवर्तन भएपछि लागू हुने नियमहरु कार्यान्वयन हुन लागेका होइनन् ।
हवाई सुरक्षा गम्भीर विषय हो । कि विमानस्थलको मापदण्ड वैज्ञानिक छैन भन्नुप¥यो, नभए जहाजलाई चुनौती दिने गरेर बनेका घरहरुको व्यवस्थापन आवश्यक नै हो । तर, अग्ला घरहरु भत्काउने प्रशासनको कदम रोक्न स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिले गत बुधबार भरतपुरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा नगरपालिका र विमानस्थल कार्यालयका अधिकारीहरुलाई निमन्त्रणा गरे पनि उनीहरु सहभागी भएनन् ।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दल र अन्य संघसंस्थाले अहिले आएर मापदण्ड लागू गराउन खोज्नु स्थानीयको हितमा नभएको धारणा राखेका थिए । मर्कामा परेका स्थानीयलाई रूचिकर हुने कुरा बोल्नु अन्यथा होइन । तर, राजनीतिक दल हवाई सुरक्षाका विषयमा पनि यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ । विमानस्थल र वरपरका घरहरुलाई यथास्थितिमा राख्न कत्तिको सम्भव छ ? नभए के गर्नुपर्छ भन्ने योजना दलहरुले बनाउनैपर्छ ।
बेलामा जागेन, अहिले जंगिँदै छ ः
विमानस्थलवरपर अग्ला घर बन्नुहुँदैन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा नहुन सक्छ । तर, विमानस्थल प्रशासन र घर बनाउन स्वीकृति दिने नगरपालिकाले यो विषयमा थाहा भएन भन्न मात्रै नपाउने होइन, कार्यान्वयन नगराए कारबाहीको भागिदार
हुनुपर्छ । मापदण्ड लागू गराउने सन्दर्भमा कसको भूमिका के थियो, एक पटक हेरौँ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ र २ मा विमानस्थलवरपर बनाउन मिल्ने घरहरुको उचाइ र मापदण्ड तोकिएको छ । भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले विसं २०६३ सालको मंसिरमा मापदण्डसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
त्यसपछि, विसं २०६४ सालको फागुनमा विमानस्थलवरपर प्लटिङ हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले प्रधान कार्यालयलाई गराएको थियो । प्रधान कार्यालयले तत्कालै भरतपुर विमानस्थललाई उडान सुरक्षामा असर नपर्ने गरेर निर्माण कार्यको नियमन र अनुगमन गर्न पत्राचार
फागुन ३० मा प्रधान कार्यालयबाट त्यस्तो पत्र आएपछि भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले विसं २०६४ सालकै चैत्र १८ गते मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्न भरतपुर नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । भवन निर्माण तीव्र हुँदै गएपछि विमानस्थल कार्यालयले विसं २०६५ सालको पुस २० र चैत्र ३० मा फेरि पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
भवन मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्न तीन–तीन पटक विमानस्थल कार्यालयले पत्राचार गरे पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेको अध्ययन कार्यदलले पत्ता लगाएको हो । पछिल्लो पटक पत्राचार भएको झन्डै आठ महिनापछि बल्ल नगरपालिकाले विमानस्थल कार्यालयलाई पत्र लेखेर नक्सा शाखाका प्राविधिकहरुलाई जानकारी दिलाउन आग्रह गरेको छ ।
विसं २०६६ सालको मंसिर २५ मा नगरपालिकाले विमानस्थल कार्यालयलाई पहिलो पटक पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि पनि भवनहरु बन्ने क्रम कम भएन । विमानस्थल कार्यालयले गएको कात्तिक १३ मा फेरि नगरपालिका कार्यालयलाई पत्र लेखेर अग्ला भवन रोक्न तत्काल अनुरोध गरेको थियो ।
यो पत्रपछि गएको मंसिर २५ गतेदेखि भरतपुर नगरपालिकाले नक्सा पास कार्य रोकेको छ । ऐन बनेको १५ वर्षपछि र कार्यान्वयनका लागि विमानस्थल कार्यालयले ताकेता सुरू गरेको छ वर्षपछि बल्ल नगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छ । विमानस्थल कार्यालयको पत्राचारपछि नै नगर विकास समितिको स्वीकृति पाएर प्लटिङ भएको ठाउँमा अग्ला घरहरु बनेका छन् । त्यसैले प्रस्ट हुन्छ, नगरपालिका बेलामा जागेन । अहिले जंगिएर लफडा निम्त्याउँदै छ ।
अनियमितताको आशंका ः
कुल २५७ मध्ये विमानस्थलको दक्षिणतर्फका स्थायी १५६ र अस्थायी १२ वटा भवनहरु मापदण्डभन्दा अग्ला भएको प्रतिवेदन हालै मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । ती घरहरु भरतपुर नगर विकास समितिले विसं २०६५ सालको जेठ र साउनमा स्वीकृति दिएपछि जग्गा व्यवसायीहरुले प्लटिङ गरेर बेचेका घडेरीमा बनेका छन् ।
जग्गा व्यवसायीहरुको कम्पनी युनिक ग्रुप र गंगा प्रालिले त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलले पटकपटक ताकेता गर्दा नगरपालिका किन चुप लागेर बस्यो ? नगर विकास र नगरपालिकाले प्लटिङ व्यवसायीको स्वार्थलाई संरक्षण पो गरेका हुन् कि ? स्वाभाविक रुपमा नै यस्तो शंका जसको मनमा पनि उब्जन्छ ।
‘नगर विकासले प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्न दिने । नगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास पनि गर्ने । घडेरी सबै नबिक्दासम्म केही नगर्ने । प्लटिङ व्यवसायीले घडेरी बेचेर सकेपछि
अनि अहिले घर अग्ला भए भनेर भत्काउन थाल्ने । अन्याय मात्रै होइन, यहाँ ठूलै षड्यन्त्र भएको छ’– सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा
संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्यामकुमार गिरीले भने ।
यो आशंकालाई निवारण गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । तर, पुष्पराज शर्माको अध्यक्षतामा रहेको नगर विकास समितिले घडेरी बेच्न स्वीकृति दिने बैठकमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले, माले, राप्रपा, जनमोर्चाका नेताहरु पनि सहभागी भएका छन् । उ बेला आफैँले गरेको निर्णयलाई अहिले दलहरुले के–कसरी अनुचित हो भनेर तोक्ने आँट गर्लान् । त्यो बैठकमा भरतपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर पनि सामेल थिए । जब कि त्यो बैठकभन्दा चार महिनाअघि नै भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले भरतपुर नगरपालिकालाई बिल्डिङ कोड तयार गरेर लागू गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
सतहमा घर भत्काउने र भत्काउन नदिने कुरा मात्रै आएका छन् । कुन–कुन खाले भित्री चलखेलले यस्तो अवस्था आएको हो, यो पाटो पनि अब बिस्तारै खुल्दै जाने छ । विषय भत्काउँछु र भत्काउन हुँदैन वा भत्काउन दिँदैनौँ भन्ने मात्रै हुनुभएन । नियमविपरीत हुने हो, हवाई सुरक्षामा गम्भीर आघात पर्ने हो भने भत्काउन हुँदैन र भत्काउन दिँदैनौँ भन्ने अडान राख्नु कत्तिको जायज हुने हो ? यदि भत्काउनै पर्ने हो भने यो अवस्था आउने गरेर घर बनाउन दिने निकायलाई कारबाही गर्ने र घर भत्केका सर्वसाधारणलाई चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति पनि कारबाहीमा परेकाहरुबाटै भराउनेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विश्वमा सन् २०१० को आँकडाअनुसार ११ हजार ३३ प्रजातिका चराहरु पाइन्छन् । सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘नेपाल्स नेसनल रेडलिस्ट अफ...